SAWIRRO: Isku xirka nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka casriga ah. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
SAWIRRO: Isku xirka nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka casriga ah.
by admin 8th October 2019 067
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta daah-furay isku xirka nidaamka maaliyadda ee Wasaaradda maaliyadda (SFMIS) iyo nidaamka casriga ah ee maamulka lacagaha Bangiga dhexe ee dalka, (Core Banking system) oo ka qayb qaadanaya daah-furnaanta, la dagaallanka musuqa iyo fududeynta wada-shaqeynta bahda maaliyadda dalka.
Gudoomiyihii dagmada Buulo-burte oo xilkii laga qaaday iyo Khilaaf xoogan oo kadhashay.
Somaliya oo buuxisay shuruudaha dhaqaale ee Qaramada Midoobay.
Daawo: Maxaadan ogeyn oo kasoo baxay kulan xalay muqdisho ku dhexmaray C/wali Gaas iyo Qaar kamid ah Golaha Wasiirada Xukuumadda Kheyre?
Mxaadan Ogeyn oo Amisom ay ka sheegtay Doorashada Soomalia ka dhaceysa iyo…..
Tifaftiraha K24 24th August 2016